Trano lehibe nirodana etsy Anosizato Atsinanana: lehilahy iray maty tsy tra-drano, mpiasa fito hafa naratra mafy | NewsMada
Nirodana tampoka vokatry ny ora-nikija eto an-dRenivohitra, omaly, ny trano lehibe iray eo an-dalam-panamboarana, eny Anosizato Atsinanana I. Mpiasa iray maty tsy tra-drano, tototra tao, raha fito hafa naratra mafy.
Olona iray maty, fito naratra mafy! Io ny vokatry ny fianjeran’ny trano lehibe iray misy rihana eny Anosizato Atsinanana I, omaly tamin’ny 9 ora maraina. Mpiasa ao amin’ilay trano lehibe vao hamboarina ireto nianjeran’ny trano ireto. Hatairana ny an’ireo nipetraka eo amin’ny manodidina ity trano lehibe ity raha nandre firodanana mafy dia mafy avy amin’ilay trano. Horakora, hiakiaka, ranomaso… santionany amin’ireo fifanjevoana tamin’ilay fianjerana trano nifatratra amin’ireo mpiasa nanamboatra trano eny Anosizato ity. Lehilahy iray maty teo no ho eo, raha nentina haingana namonjy hopitaly kosa ireo mpiasa fito lahy hafa. Lehilahy iray hafa kosa, mbola nifamonjena tao amin’ilay trano. Teratany vahiny no tompon’ity trano ity ary mpiasa manodidina ny 80 mahery no miasa ao, araka ny fanazavan’ny mpiasa iray. Trano misy rihana iray ity trano ity ka ny ao ambany rihana efa misy mipetraka fa ny any ambony rihana kosa mbola eo an-dalam-panamboarana, rah any fanazavana voaray. Fotoana fohy taorian’ny nitrangan’ny loza, tonga teny an-toerana haingana ny mpamonjy voina. Araka ny fanazavan’ny lehiben’ny sampana mpamonjy voina, ny lietnà Kly Razafimanahaka Tiana, nisy tokoa ireo mpiasa nianjeran’ny trano tao amin’ity toeram-piasana ity ary nanano sarotra tanteraka ny famonjena satria mbola mihetsiketsika ny rindrina. Nisy ireo mpiasa naratra ka nalefa haingana any amin’ny hopitaly raha olona iray kosa hatreto no namoy ny ainy.
Naharitra adin’ny efatra ny fisokirana ny razana…
Nanano sarotra ny fisokirana ny razana tao anatin’ny korontam-biriky sy ny “béton”. Nomarihin’ny mpamonjy voina fa naharitra adiny efatra ny fisokirana ny fatin’ilay niharam-boina. Natahorana ihany koa ny mety hirodanan’ny sombiny tamin’ilay trano ka tsy maintsy nitady ny fomba rehetra nahafahana nikaroka ny fatin’ilay niharam-boina ny mpamonjy voina, araka ny fanazavan’ny Lt-Kly Razafimanahaka Tiana hatrany. Manahy ny mponina fa vokatry ny ranon’orana be loatra ny antony nahamotraka ny rindrina ka nampianjera ilay trano. Tonga teny an-toerana ny polisy sy ny zandary nanao ny fanadihadiana ka aorian’izay no hamantarana ny marina rehetra momba ity voina nitranga ity. Tsy afa-nivezivezena intsony teny amin’ny manodidina ity trano nianjera ity.